Mi Note 4G (MIUI6 Stable) အတွက် PC မလို အဆင်ပြေဆုံး root နည်း « XMS-MMF
Mi Note 4G (MIUI6 Stable) အတွက် PC မလို အဆင်ပြေဆုံး root နည်း
1. Supersu.zip: http://download.chainfire.eu/396/SuperSU/
2. Philz Recovery: http://www.mediafire.com/?olknbd6r7bgynmm
SD Card ထဲသို့ထည့်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်Updater ကနေ Philz Recovery အား Select
update package ကိုရွေးပေးပါ။ Reboot ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာလျှင် Updater ကနေ Reboot to Recovery ကိုရွေးပေးပြီး Philz Recovery ထဲဝင်ပါ။ Philz Recovery တွင် Install zip မှတစ်ဆင့် SD Card ထဲမှ Supersu.zip အား install
လုပ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် Reboot ချပေးပြီး Supersu ထဲသို့ဝင်ပေးပါ။ Supersu မှ binary အား update လုပ်ခိုင်းလျှင် Normal ဖြင့် update လုပ်ပြီး reboot
ချပေးပါ။ ပြန်တက်လာလျှင် Root Access လိုသော app တစ်ခုခုအား ဖွင့်ပြီး Supersu မှ Grant လုပ်မလုပ်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ Grant မလုပ်သေးလျှင် Play Store မှတဆင့် Supersu အား update လုပ်ပေးပါ။ ထို့နောက် Supersu အား ဖွင့်ပြီး Su၏ binary အားလိုအပ်လျှင် Normal ဖြင့် update လုပ်ပြီး reboot ချပေးပါ။ ပြန်တက်လာလျှင် root access ရပါပြီ။
#Mi Recovery အားပြန်လိုလျှင် Stock Recovey: http://www.mediafire.com/.../fiar2ls.../cwm_stock_signed.zip
အပေါ်မှဖိုင်အား Updater မှ Select update package ရွေးပြီး reboot ချပေးဖြင့် Mi Recovery အားပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Philz Recovery & Mi Recovery Linkအတွက် ကိုTin Htay Ag အား Credit ပေးပါတယ်။
By Ye Htet Aung 3:52:00 AM